U-Quinta das Lindas - I-Airbnb
U-Quinta das Lindas
Mondim de Basto, Vila Real, i-Portugal
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Paulo
Ukusuka eNdlini, ungajabulela isiqongo segquma iSenhora da Graça kanye nezinye izindawo ezizungezile ngaphakathi kwepulazi ngokwalo, ungavakashela izivini zendawo kanye namasimu ezolimo, isb izilwane: izinkukhu, onogwaja, izingulube nezinkomo.
Ngiphakamisa njengezindawo ongazivakashela: inkaba yedolobha, ikakhulukazi indawo yalo eluhlaza nendawo eyizungezile, iSenhora da Graça, Fisgas Ermelo, Dam Alvão phakathi kwezinye. Ngaphakathi kwedolobha kunezindawo zokudlela eziningana namabha, amanani amahle kanye nesevisi.
Lapho uqasha indlu okufanayo kuphela ngawe nomndeni noma abangani, Nokho, iqembu ngalinye labantu ababili, banelungelo 1 Igumbi endlini uma ufisa ukuhlala emakamelweni ahlukene, kudingeka wenze inkokhelo ngaso leso sikhathi, ngemali engu-€ 10, ngokuhlanza elinye igumbi, ukuwasha noku-ayina izingubo zombhede owengeziwe.
Sicela uthinte indawo ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.